Carmi Car Rental: Ụgbọ ala mgbazinye na $ 15 / ụbọchị | Carrentalchoice.com
Chọọ Miami Car mgbazinye
Ụgbọ ala ụgbọala Miami: Ụgbọ ala ụgbọ ala na Miami iji chọpụta ebe egwuregwu nke Florida!
Ọ bụrụ na Florida bụ ebe egwuregwu nke mba ahụ, Miami ga-abụ ụlọikpe etiti dị na steeti. Ịgafe ebe a na-akpọ Aussie na-asọ asọ n'akụkụ ebe a na-egwu egwu beachfront na ụlọikpe Wimbledon na ndị hụrụ Britain na ndị tennis hụrụ ya n'anya, Miami bụ ebe ị ga-anọ ezumike, ị ga-atụrụ ndụ ma nwee oge nke ndụ gị. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-azụ ahịa ma ọ bụ na ịchọrọ ịbanye na ezumike ezumike, Miami ga-ahapụ gị ka ụba na ndị ọzọ.
Miami nwere ọtụtụ ọdịiche iji nwee obi ụtọ. Azụ, sọọfụ na anyanwụ bụ ihe okike ebum n'uche. Obodo ahụ mere ka ọ nwee ihe niile kwesịrị ekwesị maka ezumike zuru okè. Enwere ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-akwụ ụgwọ ma na-emefu ego, ụlọ ọrụ azụmahịa na ụlọ ahịa ịzụ ahịa, ụfọdụ n'ime ụlọ ọrụ ndị dị mma na ọdụ ụgbọ mmiri na ụwa na enweghị ebe ntụrụndụ. N'agbanyeghi afọ, ihe ị na-eme nakwa ebe ị si bịa, Miami ga-enye gị karịa ihe ịkwesịrị iji nọrọ zuru oke.
Mana ịmalite nke a, ị ga-achọ ịgbazite ụgbọ ala na Miami. Ebube obodo a dị ka onye kachasị mma na mba a ma ọ bụghị karịa Forbes otu afọ, a kwupụtawo ya dị ka isi ụgbọ mmiri nke ụwa, obodo ahụ bụ ebe ego na-etiti obodo ndị nwere ọtụtụ ụlọ akụ karịa ebe ọ bụla ọzọ na mba ahụ na obodo di iche iche di iche iche karia ka i chere.
Ịchọta mgbazinye ụgbọala na Miami abụghị nnukwu ihe. Ihe ị ga - ekpebiri bụ ụdị ugwo ụgbọ ala na Miami ị ga - enwe obi ụtọ. Ị nwere ike ịnweta ụdị ụgbọ ala ọ bụla ị chọrọ. Porsches ọhụrụ ma ọ bụ Caddies, nke dị na Bentley ma ọ bụ Toyota enyi na enyi, site na Chevys ka Ford, Audis na Volkswagens, ị ga-enweta ụdị ụgbọ ala, ụbọchị ọ bụla nke izu na oge ọ bụla n'afọ. N'ọchịchịrị anwụ nke United States, ọ dịghị ụbọchị oyi na-adịghị ma ọ dịghị oge ọ bụla ma ọ bụ ubu. Oge ọ bụla dị mma maka ezumike ma ọ bụ azụmahịa na mgbe ị bịarutere, gbazite ụgbọ ala na Miami ma chọpụta ebe egwuregwu na ụlọikpe etiti.
Ụgbọ ala ụgbọala na Miami na-abịa n'ọtụtụ ndokwa. Ị nwere ike ịnya ụgbọ ala a na-agbagharị ụgbọala, ịnwere ike ịkwọ ya n'onwe gị, ị nwere ike ịmekọrịta, ị nwere ike ịhọrọ ụzọ a họọrọ ma ọ bụ ọrịrị mgbe ị ga-enwe ụgbọ ala ma ọ bụ ị nwere ike ijide ya ma ọ bụrụhaala na ị chọrọ ebe ọ bụla i nwere ịga.
Ịchọta ụgbọala mgbazinye na Miami
Ịchọta ụgbọala gị zuru oke agaghị adị mfe. Nanị jupụta n'ụlọnga ọchụchọ Miami na nkọwa gị wee pịa 'Akwụkwọ Ugbu a'. Ị ga-ahụ ọtụtụ ụgbọ ala ụgbọala ndị nwere ọnụahịa na ọnụego a na-akwụ ụgwọ dị n'etiti ụbọchị ị ezipụta.
Ulo oru ugbo ala
Iji kwụ ụgbọ ala, ị ga-achọrịrị ikike ịnya ụgbọ ala ziri ezi na kaadị akwụmụgwọ ugbu a. Ihe ndị a ga-adị mkpa iji mee ka ụgbọ ala gị kwụọ ụgwọ na ịnakọta ụgbọala gị. N'ebe ụfọdụ, a ga-achọkwa ka ị chee ọkwa paspọtụ gị ma rịọ ka a kpọọ gị mgbe niile Ego ere ere. Ị ga - enwetaghachi ego gị mgbe ị debere ụgbọ ala gị, echefula ya ka ịlele nkọwa ahụ, bipụta ya ma were ya.
Ụlọ Mkpọtụrụ ụgbọala Miami
Ebe ụgbọ ala Miami Beach
Ebe Ugwu Ugwu North Beach Miami,
South Beach Miami Car Rental
Ebe ụgbọ ala Miami Airport
Ebe ụgbọ ala Miami Port
Obodo Miami (Ebe dị iche iche)
Miami Florida bụ otu n'ime ụgbọ ala Carrentalchoice.com nke kachasị elu n'ihi ihu igwe, osimiri, ájá na anyanwụ. Ọ bụ otu n'ime obodo kachasị mma Florida na ndị bi na 400,000 bi na ya.
Iji na-agagharị ngwa ngwa ọ kasị mma ịgbazite ụgbọ ala na miami. O doro anya na, ndịda Miami na Miami Beach dị iche n'ebe dị anya site na ibe ha. Ebe ọhụhụ na ebe niile dị na obodo ahụ, ọ ga-abụ ihe na-agaghị ekwe omume ịhụ ihe niile 'must-do' mgbe ịnọ na-enweghị ụgbọala. Anyị nwere Miami South Beach ụgbọ ala na-arụ ọrụ na Miami North osimiri ụgbọ ala na-arụ ọrụ nakwa ọtụtụ ebe ndị ọzọ na ime obodo na-eme ụgbọala ụgbọala na Miami mfe.
Ọtụtụ ndị njem nleta na-aga South Beach n'oge ìhè ehihie maka ịzụ ahịa na nke osimiri n'onwe ya. Ime nke a na-eme ka ezi mmụọ nke South Beach pụta ìhè bụ nke gosipụtara onwe ya site na nhụsianya ya dị egwu nke na-achọta n'ọtụtụ bọs na oghere mmiri nke na-emeghe ruo oge mbụ.
Ọ bụ ezie na a na-ewere Miami dịka 'isi obodo' na America n'ihi mmekọrịta ya na ọgwụ ọjọọ na mpụ ndị omempụ, obodo ahụ nwere ike ịghọ ndị njem nleta mgbe ha na-agafe ebe ụfọdụ (ndị njem na-adịghị agakarị). Dị ka ihe atụ, Overtown nwere ọnụ ọgụgụ kasị elu na mpụ na obodo ahụ ma ọ bara uru ka ọ ghara izere echiche onye njem nleta.
Otu mpempe njem ụgbọ elu na Miami na nnukwu ụgbọelu dịka British Airways nwere ike ịkwụ ụgwọ ihe ọ bụla n'etiti £ 400- £ 600 mgbe ntinye akwụkwọ na akpaghị anya, ọ bụ ezie na ọ bara uru ịtụle akwụkwọ akụkọ maka ụlọ ahịa pụrụ iche dịka British Airways na Virgin Atlantic. Na nso nso a dị ka January 2009, ụgbọ elu ndị a họọrọ site na £ 300 maka nloghachi.
N'ihe dị ka Miami, nhọrọ ntinye dị iche iche. Miami nwere akụkọ ihe mere eme nke inwe ike ịmepụta ụlọ ahịa dị iche iche dị iche iche nke ụlọ ahịa dị iche iche na ọtụtụ ụlọ ndị isi, na ọnụ ahịa na-amalite site na £ 100 n'abalị na ihe ọ bụla dị ka £ 500 maka ụlọ ndị ọzọ dị oké ọnụ ahịa. Chains dị oke ọnụ ahịa na-adabere n'ọnọdụ. Ịnọtụ na kpakpando ise Ritz Carlton na South Beach ga-eme ka ị laghachi gburugburu £ 500 n'abalị, ebe otu abalị na ezumike njem ma ọ bụ ihe yiri nke a ga-efu gị gburugburu £ 100- £ 150 kwa ụlọ kwa abalị.
A na-ewere ebe ndị dị n'ụsọ oké osimiri gburugburu Miami dị oke ọnụ ma e jiri ya tụnyere ndị fọdụrụ na United States. Enwere ụgwọ ọrụ kachasị elu maka $ 2.50, tinyere nsonye $ 0.40 maka 1 / 6 nke njem mile ($ 2.40 kwa mile), nke pụtara njem njem ise ga-efu gị $ 14.50.
Miami bụ ihe oriri na-ekpo ọkụ mgbe ọ na-abịa nri, na-ekele ọtụtụ mba dị iche iche nke mba dị iche iche bụ ndị guzobere na Miami. A maara Miami dị ka 'New World' site na foodies n'ihi nke a na ụlọ oriri na ọṅụṅụ 6000 ị nwere ike ịchọta nanị ebe etiti. Na-atụ anya ịkwụ ụgwọ $ 50 maka isi na ụlọ oriri na nkwari akụ na $ 25 maka nri na ụlọ oriri na ọṅụṅụ a na-asọpụrụ.
Njikọ ndị bara uru: Ụgbọ ala ụgbọala Miami International Airport
5 dabere na 5 votes
Cheap Car mgbazinye Miami Car mgbazinye